नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : पखाला लाग्यो भनेर दुई दिन घरबाट ननिस्केका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सोमबार बिहानै डोटी हानिए
पखाला लाग्यो भनेर दुई दिन घरबाट ननिस्केका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सोमबार बिहानै डोटी हानिए
खनाल हिजोआज हरेक दिन टेलिफोनमा, सुशील कोइराला अझै राजधानीबाहिरै, बाबुराम कुचो समाएर सडकमा !
पखाला लाग्यो भनेर दुई दिन घरबाट ननिस्केका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सोमबार बिहानै डोटी हानिए । शान्ति रसंविधानका विषयमा सहमति जुटाउन होइन, विवाद र आरोपप्रत्यारोपले थलिएको आफ्नैपार्टीभित्रको पनि आफ्नै लाइनका कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन । संविधानसभामाप्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुको सामुहिक छलफल नै छाडेर प्रचण्ड डोटी हानिएका हुन् । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका पनि माउ नेता । अरु सबै भएर प्रचण्डमात्रै नहुनु भनेको बैठक र छलफलको औचित्य नै नहुनु हो । प्रचण्ड सहितका शीर्षनेताहरु राजधानी बाहिर आआफ्नै काममा व्यस्त भए भनेर पहिलेदेखि नै आलोचनाभैरहेको छ । आलोचना बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दुई दिनअघिमात्रै प्रेस नोट निकालेर दलहरुलाई शान्ति र संविधानमा ध्यान केन्दि्रत गर्न आग्रह गरे ।नेताहरुलाई आन्तरिक काममा नलागेर शान्ति र संविधानमा लाग्न प्रधानमन्त्रीले गरेको यो आग्रह उनकै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले उल्लंघन गरेका छन् । आलोचना बढ्न थालेपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने यसबीचमा आफूराजधानी बाहिर नजाने घोषणा गरे । पार्टीका अरु सबै शीर्ष नेता भाषण गर्नठाउँठाउँमा पुगेपनि उनले राजधानी छाडेनन् । तर उनको राजधानी बसाई पनि फलदायीदेखिएको छैन । उनी राजधानी बस्नु र नबस्नुको भिन्नता खासै अनुभूति हुन सकेकोछैन । शान्ति र संविधान निर्माणबारे दलहरुबीच छलफल तीव्र पार्नुपर्ने बेला खनालहिजोआज हरेक दिन एकघण्टा टेलिफोनमा झुण्डिन थालेका छन् । जिल्लाका बिभिन्न दलकानेता, कार्यकर्ता, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र बुद्धिजीविसित छलफल गर्ने आफ्नो दैनिकीअनुसार उनले सोमबार चितवनमा फोन गरेर बिहानको एकघण्टा बिताए । त्यसक्रममा उनलेआफ्ना पुरानै पट्यारलाग्दा तिनै प्रतिबद्धता
र टिप्पणी सुनाए । उनको यो टेलिफोनसम्बाद चर्चा कमाउने एउटा पाटो बाहेक शान्ति र संविधान निर्माणको काममा सघाउ पुग्नेकाम होइन भन्ने सबैलाई थाहा छ । किनकी यो बेला अरुले भन्ने भनेको जेठ १४ भित्र जसरीपनि शान्ति र संविधान निर्माणको काम पूरा गर भन्ने हो । यही कुरा सुन्न हरेकदिन टेलिफोनमा झुण्डेर रमिता देखाउनु आवश्यक नै छैन । तीन दलका अर्का माउ नेता कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला अझै राजधानीबाहिरै छन् । एक हप्ताभन्दा अघिदेखि बिभिन्न ठाउँमा पुगेर कोइरालाले भाषण गरेकागर्यै छन् । पार्टीको जागरण अभियान अन्तर्गत भएका कार्यक्रममा कोइरालाले शान्ति रसंविधानमा आफूले निकै काम गर्न खोजेको, तर माओवादीले गर्न नदिएकोआफ्नो पुरानै भनाई दोहोर्याईरहेका छन् । बिभिन्न जिल्ला घुम्दैफिर्दै सोमबारबिहान बुटवल पुगेका उनले अब आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने छाँट देखिएको बताए । तर अहिले सरकार भन्दा शान्ति र संविधानतिर ध्यान केन्दि्रत गर्ने बेला हो भन्नेसबैलाई थाहा छ । तर कोइरालालाई फेरि एकपटक सरकारको जोड घटाउ गर्ने जाँगर पलाएको छ ।
काम गर्नुपर्ने शीर्ष नेताहरु यसरी शान्ति र संविधान निर्माणको मेलो अलपत्रछाडेर आआफ्नै धूनमा बरालिन थालेपछि संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्रनेम्वाङको छटपटी बढेको छ । अरु केही गर्न नसकेपछि नेताहरुलाई लौ मिल्नोस्, छलफलगर्नुहोस्, यो पाराले त भएन है भनेर बेलाबेला घच्याउने नेम्वाङले सोमबार बिहानप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेट्नुभयो । बेलुकीपख उहाँले राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवसित भेट गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीसितको भेटमा सभाध्यक्षनेम्वाङले चैत महिनाभित्रै शान्ति प्रकृया अन्तर्गत सेना समायोजनको काम सक्ने र संविधाननिर्माणको आधार तयार पार्ने यसअघिको सहमति कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले पनि यसअघि भएको सहमति अनुसार चैत मसान्तभित्रै समायोजन सक्ने रसंविधान निर्माणका विवादित विषयमा पनि सहमतिको आधार बन्ने दावी गर्नुभयो । तरयसको आधार के भन्ने चाहिं उहाँ आफैंलाई थाहा छैन ।
मंगलबार र बुधबार गुप्तबास
राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणालीजस्ता संविधाननिर्माणका विवादित विषयमा यसअघि जति प्रयास गरेपनि सहमति जुट्न नसकेपछि नेताहरुदुई दिन एकान्तमा बसेर छलफल गर्ने तयारीमा छन् । राजधानीमा बसेर छलफल गर्दासञ्चारकर्मी पछि लागेर हैरान गर्ने हुँदा राजधानी बाहिरको कुनै गोप्य ठाउँमा पुगेरछलफल गर्ने उनीहरुको तयारी हो । यसअनुसार मंगलबार र बुधबार गोप्य बैठक बस्नेदलहरुबीच यसअघि नै सहमति भैसकेको छ । तर ठाउँको तय भने भैसकेको छैन ।प्रधानमन्त्रीसितको भेटमा सभाध्यक्ष नेम्वाङले यो कुरा सम्झाउँदा भट्टराईले यसअघिको सहमति अनुसार मंगलबार र बुधबार गोप्यवार्ता हुने जानकारी गराउनु भएको छ ।